Yugnepal | कैलालीमा ८६९ प्रजातिका वनस्पति
मङ्गलबार १०, जेठ २०७९ ०६:४९
कैलालीमा ८६९ प्रजातिका वनस्पति
युग संवाददाता 102 पटक पढिएको
धनगढी । वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र कैलालीले यो जिल्लामा दुई स्थानमा वनस्पतिको संरक्षण गरिरहेको छ । केन्द्रले धनगढी उपमहानगरपालिका–७ को देवहरिया वनस्पति उद्यान र गोदावरी नगरपालिकाको गोदावरीस्थित संरक्षण क्षेत्रमा वनस्पतिको संरक्षण गर्दै आएको हो ।
१४९।५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सो उद्यानमा विजयसाल, लौठसल्ला, बेंत, वनमूला, खयर, सुनाखरीको स्वस्थानीय संरक्षण भइरहेको केन्द्रका प्रमुख गङ्गादत्त भट्टले बताए । उनले वनस्पति उद्यान बनाउका लागि संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान र पुनःउत्पादन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै देवहरिया उद्यानको राम्रोसंग संरक्षण भएमा यो यहाँको प्रमुख सौन्दर्य स्थल बन्ने बताए ।
यसैगरी, केन्द्रले कैलालीको गोदावरीमा पनि १०।६ हेक्टर जमिनमा गोदावरी संरक्षण क्षेत्र बनाएर वनस्पतिको संरक्षण गर्दै आएको छ । कैलालीमा हालसम्म ८६९ प्रजातिका वनस्पति पाइएको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये ८१२ प्रजातिको फूल फुल्ने र ५७ उन्यू प्रजाति रहेको भट्टले बताए । यो जिल्लामा ५०२ प्रजातिका वनस्पतिलाई स्थानीयले परम्परागत ज्ञान र सीपका आधारमा प्रयोग गर्दै आएका केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
परम्परागत ज्ञान र सीप धेरै राम्रो रहेको र त्यो हराउन नहुने वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र भट्टले बताए । नेपालमा हालसम्म एक हजार १२३ प्रजातिका झ्याउ, दुई हजार ४६७ प्रजातिका च्याउ तथा ढुसी पाइने गरेको छ । नेपालमा च्याउमात्रै एक हजार २९१ प्रजातिका पाइने गरेको छ । जसमध्ये ३४ प्रजातिको च्याउ नेपालमामात्रै पाइने गर्दछ । नेपालमा पाइने जम्मा च्याउमध्ये १५९ प्रजातिका च्याउ खान मिल्ने रहेको प्रमुख भट्टले जानकारी दिए ।
एक सय प्रजातिका च्याउ भने खान नहुने, विषालु रहेको जनाइएको छ । खास गरेर कमिला वा कीराले खाएको च्याउ देखिन्छ भने त्यो खान योग्य रहने गरेको उनले बताए । यसैगरी, नेपालमा ९९८ प्रजातिका लेउ, ५८२ प्रजातिका न्यूरो तथा उन्यू, कोणधारी वनस्पति २८, लालीगुराँस ३२ र फूल फुल्ने पाँच हजार ३०९ प्रजातिका वनस्पति पाइने गरेको जनाइएको छ । फूल फुल्नेमध्ये ३१२ प्रजाति नेपालमामात्रै पाइने गरेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । सुदूरपश्चिममा लौठसल्ला प्राय सबै जिल्लामा रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । लौठ सल्ला क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने गरेको जनाइएको छ । खास गरेर लौठ सल्ला पाठेघर र स्तन क्यान्सरका बिरामीका लागि निकै लाभदायक रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
मङ्गलबार २९, चैत २०७८ ०१:०९ मा प्रकाशित
धनगढीमा ४७ हजार बढी मत गन्दा कसको कति ?
स्वतन्त्र उमेदवार हमालले गरे धनगढी मोडल बनाउने योजना सार्बजनिक
अछाममा नेपाली सेनाको गाडी दुर्घटना,५ जना घाईते
विसु मनाउन घर फर्कदै भारत गएका सुदुरपश्चिमेली वासी
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना खुल्यो
गोली लागेर एक जनाको मृत्यु ४ जनालाई नियन्त्रणमा
धनगढीको मेयरमा गोपाल हमाल उपमेयरमा राना विजयी
मेयरको ६नबर वडामा मा माओवादीका चौधरी प्यानलसहित विजयी
धनगढी–५ मा कांग्रेसका शाही प्यानलसहित विजयी
सहिद गेट नजिकै आगलागी
काँग्रेस नेता रावतको वडामा काँग्रेस प्यानललाई तेब्बर मत
एमालेलाई हराएर एकीकृत समाजवादीले खाता खोल्यो
कैलारीमा गठबन्धनको कार्बाहीमा परेका काँग्रेसका चौधरी विजयी
उपमहानगरमा ११५३ मतगणना गर्दा कसको मत कति ?
गठबन्धनबाट नै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ ः देउवा
एमाले अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिमको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै